အသက် ၂၇ ရက် - ရက်ပေါင်း ၂၅၀: ညစ်ညမ်းဝတ်စုံများပျောက်ကွယ်သွား - Your Brain On Porn
အသက် ၂၇ ရက်မှရက်ပေါင်း ၂၅၀ အတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပျောက်ကွယ်သွားစေပါသည်
ငါအွန်လိုင်းတင်တာကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့အစောပိုင်းကာလတွေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်မအောင်မြင်တာတွေကြောင့်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတွေကိုဖတ်တာကအရမ်းထိရောက်တယ်ဆိုတာနားလည်ခဲ့တယ်။ မင်းမှာတွန်းအားတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ကြီးထွားတိုးတက်မှုတွေအကြောင်းကိုဖတ်ပြီးမင်းလည်းအဲဒီလိုဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအကြာအလွန်အကျွံသုံးစွဲပြီးနောက်ငါ့မှာဒီမှာရှိသည်။
ငါ၏အ post ကိုသင့်ရဲ့အမြင်ထဲမှာဆခွဲကိန်းစခွေငျးငှါအပိုဆောင်းအင်ဖို:
ပတ်ပတ်လည်အသက်အရွယ်ကတည်းကမြန်နှုန်းမြင့် porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်တင်းမာမှု 18
အကြောင်းကို 250 ရက်ပေါင်း PMO-အခမဲ့
ငါ၏အညစ်ညမ်းအရသာ reverse သလား?
ဟုတ်ပါတယ်, လုံးဝ။ သင်ပြုသောအခါ, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတာသိကြပါလိမ့်မယ်, သင်၏ဦးနှောက်ပျင်းကြီးနှင့်အသစ်တစ်ခုခုလိုအပ်သောကွောငျ့သငျသညျကိုသာသို့ dived တစ်ခုသက်သက်သာ porn-ဝယ်ယူ fetish အဘယ်အရာကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါဝန်ခံရမည်, ငါသည်အညစ်ညမ်းသို့ရတဲ့မတိုင်မီခဲ့ကြောင်း, အနည်းငယ် fetishes စောင့်ရှောက်ကိုပြု၏။ အားလုံးအရာကြွင်းလေပျောက်ကွယ်သွား, ထိုသို့စဉ်းစားထားပါတယ်ယခုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှာငါ့ကိုအမျက်ထွက်စေသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဒဏ်ဍာရီ၏ပွောငျလှောငျလက်မခံ, ငါ့ခံစားချက်ပေါ်မူတည်။
သူကပြောတယ်၊ ဒါကအိမ်မှာလေ့ကျင့်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးတယ်။ အများကြီးမဟုတ်, ဒီမှာနှင့်ရှိကျပန်းကျယ်လောင်သောဝါကျ။ အသံတစ်ခုထက်ပိုပြီးကျွန်ုပ်သံသယရှိသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အချို့သည်လူမှုရေးဆန့်ကျင်သူများ၊ အလွန်အသုံးမ ၀ င်သူများဖြစ်ကြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အခန်း၏တိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ကြသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသံသည်လုံလောက်စွာမသုံးသောကြောင့်၊ အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်ဤသို့ပြုလုပ်ပါကအခြားအသံများကိုကျော်လွှားရန်လုံလောက်သောအသံရှိခြင်းသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ခွန်အား၏အဓိကပြသမှုဖြစ်သည်။
porn ၌ငါ့အရသာကွဲပြားခြားနားခဲ့ကြသည်: ငါ [x ကို] မုန်းကြနဲ့ကျွန်မအများဆုံးမြင်ကွင်းများသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်မြင်ဘူးသော [y က] ငါစသည်တို့ကို, ပျော့ပျောင်းနှင့်ရင်ခုန်စရာကြောင့်ကြိုက်တယ်
တရိုးရှင်းပါသည်။ နောက်တဖန်ထိုမေးခွန်းကိုဖတ်ရန်နှင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မမေး: ကသင်ပိုမိုနှင့်နှိုးဆော်ခြင်းရပိုပြီးတိကျတဲ့တစ်ခုခုလိုအပ်မယ့်အကောင်းအရာကယ့်ကိုရသနည်း
ငါကဘယ်လိုသိရှိ၏။ တောင်မှငါ့အစွဲ၏အဆိုးဆုံးကာလ၌, ငါက၏ထက်ဝက်ကိုမုန်းမပါဘဲမည်သည့်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနိုင်မယ်ရှားပါးခဲ့ပါတယ်။
သူမပိတ်ထားလို့မရဘူးလား? သူတို့ဒီဟာကိုဝတ်ရမလား။ ဒီအချက်ကဘာလဲ။ သူမသည်ဤသို့သောအပြုအမူသည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်ဟုမထင်ပါ၊ ၎င်းသည်နှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်နှောင့်နှေးခြင်းများဖြစ်သည်ဟုသူမကထင်မြင်သည်။ စသည်
ဒီတစ်ခါလည်းသင့်ရဲ့စာရိတ္တကဒီအတော်ပင်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ pulsions တစ်ကျွန်နေစဉ်, သင်ဆဲသငျသညျသငျနှငျ့အတူသဘောမတူတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုသည်ကိုနားလည်ကြောင်းထေူ၏။ ထိုအဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးက၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လမ်းအတွက်သဘာဝကျပါတယ်, ဒါပေမယ့်စာရိတ္တကိုမကြာခဏသင်၏အရေးပေါ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးသဘောတူညီချက်-လူသတ်သမားဖြစ်နိုငျသောကွောငျ့, ဘေးဖယ်စာရိတ္တထားခဲ့ပါ။ ဒီနေရာမှာပဲသင်အမြဲစုံလင်သောမြင်ကွင်းတစ်ခုများအတွက် ပို. ပို. လိုက်ရှာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဒါကလှည်တစ်ခုပါ။ ငါထင်တာတော့မသေချာဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအပြည့်အ ၀ စိုက်ထူထားလို့ပဲ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုကအံ့ can စရာကောင်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေးငယ်လွန်းသည်ဟုအမြဲယူမှတ်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိနေသောအမျိုးသမီးများက၎င်းတို့အားမည်မျှစွဲမှတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သင်၏အတ္တသည်မြှင့်တင်မှုကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ အရွယ်အစားသည်အရေးကြီးသည်၊ သို့သော်သင်၏စိုက်ထူမှုများသည်မည်မျှပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိမည်မဟုတ်ပါ။
အချိန် မှစ. ငါ့တိုးတက်မှုအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်အချိန် masturbating သလဲ?
ဒါဟာဖြစ်ပေမယ့်သင်အဲဒီအကြောင်းမထင်မှတ်လောက်အောင်အံ့သြစရာမကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဖိအားကိုသက်သာစေလိုလျှင်၊ porn မပါဘဲအော်ဂဇင်ကိုအမြန်ဆုံးအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားပါ။ သငျသညျမပွုနိုငျလြှငျ, သငျသညျကျန်းမာရေးအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမဟုတ်ပါဘူး, သင်သည်သူ၏ fix ကိုလိုအပ်နေတဲ့စွဲလမ်းနေသောဖြစ်ကြသည်။
သို့သော်၊ အကြွင်းမဲ့သေချာမှုတစ်ခုရှိပါသည်။ လူတွေက“ ညစ်ညမ်းမှုမရှိ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ အော်ဂဇင်မရှိ” လို့ပြောတတ်ကြတယ်။ ဆေးလိပ်မဖြတ်ချင်သောသို့မဟုတ်စွဲလမ်းကြောင်းဝန်ခံသူများပင်အကြောင်းပြချက်တခုခုကြောင့်မကြာခဏပြောကြသည်။
ဒီတစ်ခါလည်းသင်တစ်ဦးအလယ်အလတ်ကျန်းမာထုံးစံ၌ masturbate နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်မ NOW က။ သင်သည်သင်၏ကျိုးပဲ့ခြေထောက်ပေါ်လမ်းလျှောက်ဖို့မသင့်ကိုပြောပြမှာသောဆရာဝန်မှ gibberish ၏ကြင်နာလို့ပြောသလား?
အခုသင့်ရဲ့ဦးစားပေးနောက်ကျောစက်ရုံ default settings ကိုမှသင့်ဦးနှောက်ကိုပြန်ညှိရန်ဖြစ်ပါသည်။
ငါ [x ကို] နိုင်သလား? ဒါဟာအားလုံးပြီးနောက်, porn မဟုတ်ပါဘူး။
သင်သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုရရှိရန် ရည်ရွယ်၍ ကြည့်ပါက၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင့် ဦး နှောက်သည်ဂရုမစိုက်ပါ၊ ထိုသို့သောအယူအဆများကိုနားမလည်ပါ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုသာသိနိုင်သည်။ ဘုံကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုများတွင်ပါဝင်သည် -
မင်္ဂလာဆောင်တွင်ဆင်မြန်း, swimsuits, အတွင်းခံစျေးဆိုင်အကြောင်း Google တွင်ရှာဖွေ: ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်ပါ, porn မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဟာသူမအဝတ်ကိုဝတ်၏, porn မဟုတ်ပါဘူး: အတူတူပင်။
ဒါဟာစာသားကိုဖြစ်ပါသည်, porn မဟုတ်ပါဘူး။
၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည် "ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း"၊ "ချစ်စရာကောင်းသော" / "artsy" ဖြစ်သည် - မည်သည့်ကျပန်းမဆိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုယူ။ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်သို့ပြောင်းပါ။ ကြည့်လိုက်စမ်းပါ ဦး ။
လှုံ့ဆော်မှုဒီဂရီကဲ့သို့သောအရာများ (လိင်ဇာတ်လမ်းများသည် HD ဗီဒီယိုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်အားစိုက်ထုတ် / စိတ်လှုပ်ရှားမှုအချိုးအစားနိမ့်သည်) ရှိသော်လည်း၎င်းသည်နောက်ဆုံး၌အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ “ ချစ်စရာကောင်းသော” (သို့)“ လိင်ဆိုင်ရာချစ်ခြင်းမေတ္တာ” သို့မဟုတ်“ လေးစားသောအမျိုးသမီးများ” (သင်၏ကိုယ်ကျင့်တရားပေါ် မူတည်၍) တစ်ခုခုသည်များသောအားဖြင့်ဆိုးဆိုးရွားရွားဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံးတော့ပုံမှန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖြင့်သင်ချုံပုတ်တစ်ချောင်းကိုရိုက်နှက်။ စျေးပေါသောဆင်ခြေကိုမရှာနိုင်ပါ၊ သင်ဘာလုပ်နေသည်ကိုသင်သိသည်။
ညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှုသည်ပထမနှင့်အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ၊ အရေးကြီးသည်မှာသင်၏ ဦး နှောက်ကိုလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုမျက်နှာပြင်၊ ကလစ်နှိပ်ခြင်း၊
ကျွန်မဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းကငါ့မိဘများနေ့အဘို့ကိုထုတ်ခဲ့ကြသည်ကိုဆိုလိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအိမ်ရှေ့တံခါးကိုပိတ်ပွဲ၏သံကိုကြားသောအခါ, ငါစိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့ခဲ့သည်။ သငျသညျမွငျနိုငျကြောင့်ငါ (ကဆက်ဆက် porn မဟုတ်ခဲ့) အချိန်တွင်မှ masturbated အဘယ်အရာနဲ့ဘာမှရှိပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးအကြောင်းပြချက်သင်သည်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထိုသို့လုပ်နေလျှင်လင်းလင်း, သငျသညျအရှက်နှင့်အကူအညီမရပါမှကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖွင့်နှင့်သင်တို့အဘို့ထိုသို့ပြုကလူလည်းပါဝင်သည်, သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ အချို့လူများကပိုကောင်းကံဇာတာသတင်းပို့ပေမယ့်စွန့်စားမှုအလေးအနက်ထားကတန်ဖိုးရှိတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မည်သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သင့်ကြောင်းသူကပြောပြရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း, ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာညစ်ညမ်းအကြားခြားနားချက်ကို အသုံးပြု. နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက် porn (ကြှနျုပျတို့စိတ်လှုပ်ရှားရဖို့စောင့်ကြည့်ဆိုလိုသည်မှာဘာမှ) အဖြစ်အသုံးပြု: သူမအဖြစ်အပြစ်မဲ့မြင်ရပါလိမ့်မည်တစ်ခုခုစောင့်ကြည့်တူသောသူမ၏သင်ပြောပြ အိပ်ရာများတွင်ဖြစ်ခြင်းအားကောင်းကောင်းသောအသံကြောင့်၎င်း, အတွင်းခံသို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်တွင်ဆင်မြန်းနဲ့တူပေမယ့်, Hyper-ဆွအကြောင်းကိုကြောင်းအရာကိုဖတ်ရှုတော်မူပြီးမှ, သငျသညျ, ကထွက်ခုတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ချင်ပါတယ်။
သတိရပါ၊ အမျိုးသမီးတွေကသူတို့ရဲ့ယောက်ျားတွေကိုအားသန်စေချင်တယ်။ မိမိကိုယ်ကိုသူ၏ရှက်ဖွယ်ကောင်းသောစွဲလမ်းမှုအတွက်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်လိုအပ်နေသည့်နွမ်းပါးသူတစ် ဦး ကဲ့သို့သင်ကိုယ်တိုင်တင်ပြပါကမလိုအပ်သောအန္တရာယ်များကိုသင်ယူဆောင်လာသည်။ အကယ်၍ မင်းကလွှမ်းမိုးနေပြီးသားရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲရဲတင်းကြပ်တဲ့အရာတစ်ခုခုဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တယ်လို့ပြောရင်သူမအတွက်တော့မင်းကိုအပြစ်တင်စရာမလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကမင်းကိုအပြည့်အဝထောက်ခံလိမ့်မယ်။
သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြသောအခါ, သငျသညျအကောင်းခံစားမိ, သင်ကြင်နာမှုထောက်ခံမှုများနှင့်စကားများခံယူအထူးသဖြင့်ပါ။ အဆိုပါရလဒ်သင်ပြီးသားဆိုအားထုတ်မှုအောင်မပါဘဲအပေါင်းတို့နှင့်တကွမှာမဆိုအောင်မြင်သောလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်ခြင်းမရှိဘဲ, ကောင်းသောပြန်သောကြောင့်သင်အများကြီးလျော့နည်းလှုံ့ဆော်မှုအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်စိတ်ကျေနပ်မှုမာလမ်းရတဲ့နှောင့်အယှက်?
သင့်ဦးနှောက်ကယ့်ကိုတစ် turdhole ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကသငျသညျကိုမုန်းသောကွောငျ့, ၎င်း၏လှည့်ကွက်သင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။ သငျသညျအကွောငျးကိုလုပျနိုငျဘယ်အရာကမှ, က overthink ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
ဟုတ်ကဲ့, dreamless အိပ်ပျော်ရာမှအကြောင်းနှစ်ခုဆိုနိုင်ပါတယ်အိပ်မက်တွေတစ်ပါတ်ထံသို့သွားလေ၏။
သင့် ဦး နှောက်ကမယုံနိုင်လောက်တဲ့ပုံပြင်တွေကိုသင့်ကိုဗုံးကြဲစေလိမ့်မယ်။ မကြာခဏနိုးလာတဲ့အခါငါအိပ်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်ကြီးကစာအုပ်တစ်အုပ်၊ ရုပ်ရှင်ဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားလိမ့်မယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတယ်။ အဲဒါကိုမေ့မသွားခင်သိမ်းထားတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။
ငါပြန်ဖွင့်ဆောင်ရွက်ရန်ဖို့ non-တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်အကြောင်းပြချက်နေမကောင်း-အကြံပြုခဲ့သည်ရှိခြင်း, ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ဒုစရိုက်ဖြေကိုရှင်းပြ YourBrainOnPorn ထံမှဂယ်ရီ Wilson ကဦးနှောက်ကိုတုံ့ပြန်မှုအားကောင်းလုပ်သတိရနှင့်အကြောင်းပြချက်များအတွက်။
ငါမကြာခဏတွေ့မြင်ရသည့်အရာကကျွန်ုပ်ကိုအံ့အားသင့်စေပြီး၎င်းသည်အကူအညီလိုအပ်သော်လည်း Reddit (သို့) YourBrainRebalanced ရှိစာမူအချို့ကိုဖတ်ရှုသူများ၊ အထီး - အုတ်တံတိုင်းနံရံများကိုမြင်ရ။ ၊ မကောင်းတဲ့ "ကုထုံး။ ငါဒီမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြမည်မဟုတ်, သင်ဒီမှာငါ့အအလွန်အကျွံတုံ့ပြန်မှုကိုဖတ်ရှုနိုင်သည်
အခြားအစီရင်ခံစာများသည်ယောက်ျားများအား beta orbiters (ကာတာတာပတ်လမ်းများ) နှင့်အတူပျော်မွေ့ရန်သင်ကြားခြင်းကဲ့သို့သောအလွန်ရှက်ဖွယ်ကောင်းသည် (“ သူမကိုပြုံးလိုက်သည်၊ သူမသည်ငါနှင့်ဘယ်သောအခါမျှလိင်ဆက်ဆံလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်”) ။ မင်းတွေ့တဲ့အမျိုးသမီးတိုင်းနဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်မရှိတာကြောင့်နောက်ထပ်အရှက်ရခြင်းကိုလက်ခံသင့်တယ်လို့မဆိုလိုပါ။
လူတိုင်းကကွဲပြားတဲ့အတွက်အခုငါခုခံကာကွယ်မှုနည်းသွားအောင်ကြိုးစားတယ်။ တချို့လူတွေအဲဒီလိုပဲငါလိုချင်တယ်။ ငါဘာပဲလုပ်လုပ်တခြားလူတွေကဘာကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတာကိုမဟုတ်ဘဲမင်းရဲ့ရပ်တည်ချက်ကသိပ္ပံပညာအပေါ်အာရုံမစိုက်ပါဘူး။ သင်သဘောမတူတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်သူတို့လုပ်နိုင်တယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကျင့်ဝတ်နှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ကြောင်းသိသည်။ သို့သော်သိပ္ပံပညာသည်လူတိုင်းအတွက်တူညီသည်။
ညစ်ညမ်းသောမြန်နှုန်းမြင့်ရုပ်ပုံများကြောင့်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍“ စစ်မှန်သော” သိပ္ပံပညာသည်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မသိသောအရာအချို့ရှိသည်။
ငါလုံးဝပထမဦးဆုံးမှာတစ် reboot စဉ်အတွင်းတစ်ဖက်နဲ့အော်ဂဇင်ရှိခြင်းကိုသင်အတန်ငယ်ပြန်သတ်မှတ်ကြောင်းအတည်ပြုပါ။ အဘယ်ကြောင့်? ဘယ်လောက်လဲ? ငါမစိတ်ကူးရှိသည်, ဒါပေမယ့်ငါက% 100 အတည်ပြုကြောင့်ပါဘူး။
သို့သော်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒါဟာပိုကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်: တစ်နေ့တာအဆုံးမှာ, သင်ကအစစ်အမှန်မိတ်ဖက်နှင့်အတူစိုက်ထူဖို့သင့်ဦးနှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလေ့ကျင့်ရေးတစ်ခုသာအဖော်နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ရုံသင့်ရဲ့ပျက်ကွက်အပြစ်လွတ်စေစိတ်ပျက်အားလျော့လာသည့်အခါကဒီမှာပြီးရင်, (ငါဖို့အသုံးပြု) တန်ပြန်အချက်အလက်စစ်ဆေးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏လျှင်ဒါကြောင့်အပေါ်မှာငါ့ယူသည်: ကအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
လူတွေကမင်းရဲ့အံ့ဖွယ်အမှုအားလုံးကိုမင်းဖြစ်ပျက်စေချင်တာလား။ ထို့နောက်သင်၏လှုံ့ဆော်မှုသည်အားနည်းချက်များကိုပြသခြင်းဖြင့်အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းများကိုတိုင်းစစ်ဆေးပြီး“ wow, ငါ want” ဟုသင့်ကိုယ်သင်ပြောပါ။
ငါအချို့မေ့ကိုသိပေမယ့်ကြာကြာကဒီထက်လူတွေဖတ်ပါလိမ့်မယ်, ဖြစ်ပြီး, ကြောင်းအထောက်အကူဖြစ်စေအကြံပေးဖို့ကြိုးစားနေ၏အချက်အနိုင်ယူလိမ့်မယ်။
မှတ်ချက် - သူဒီ post ကိုဖျက်လိုက်သည်